Egosipụta nkọwa na ọnụahịa nke Honor 7X | Gam akporosis
Sọpụrụ nkọwa 7X na ọnụahịa gosipụtara
Jose Alfocea | | Mobiles, Noticias
Nnukwu atụmatụ nke Honor X bụ na ọ na-enye elu ogo na ọnụ ala dị ala. Yabụ, Honor 5X 2015 bụ otu n'ime ngwaọrụ gam akporo izizi nyere onyinye na otu ọnụahịa dị ala. Ma otu ahịrị, Honor 6X mere ka ogo nke onye bu ụzọ dịkwuo mma site na ọnụahịa mmalite nke $ 250, naanị $ 50 n'elu.
Ugbu a, ọgbọ nke atọ nke usoro isiokwu a, Na-asọpụrụ 7X, na-aga ịpụta. You ga-edebe usoro ahụ dị elu, nke dịkwa ọnụ ala? Ka anyị lelee ya!
Nsọpụrụ 7X: imewe, nkọwa na ọnụahịa
N’ọnwa Septemba, Honor tinyere ozi nke ekwentị ọhụrụ ya na Weibo na Septemba na-ekpughe nke ahụ Mbido a ga-ewere ọnọdụ echi, October 11, ọ bụ ezie na amabeghị mgbe ọ ga-adị ma mbupu ga-amalite. Ma ọ bụ ezie na ọnụahịa gọọmentị bụ ihe a na-amaghị, asịrị na-egosi na ụzọ nke 270 $.
Ugbu a ekele ozi pụtara na weebụsaịtị nke ikike nkwukọrịta ndị China TENAA, anyị maara ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ gbasara Honor 7X, nke ga-eche na ọ ga - egosi ihuenyo nke 6 sentimita asatọ na 18: 9 akụkụ ruru na mkpebi nke 2160 × 1080 pikselụ. N'ime ya ga-aba a Kirin 659 processor nke ahụ ga-esonyere ya 4 GB nke RAM y 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime gbasaa site na iji kaadi microS.
Na ngalaba vidiyo na foto, Honor 7X ga-eweta nhazi nke igwefoto abuo na ihe mmetụta 12 MP tinyere ihe mmetụta 2 MP ọzọ na 8 MP n'ihu igwefoto. Banyere nnwere onwe ya, ọ ga-abụ ọrụ dịịrị nke 3.240 mAh batrị.
Gosiputa ọnụnọ nke a ihe mmetụta mkpisi aka na azụ, Honor 7X ga-abata na agba atọ, oji, acha anụnụ anụnụ na ọla edo, nke nwere ezigbo mkpa, na ụdị ihe eji emepụta igwe, nke nwere 165 gram, akụkụ nke 156,5 x 75,3 x 7,6, XNUMX mm. O di nwute, ga-apụta na Android Nougat na B NOTGH with na gam akporo Oreo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sọpụrụ nkọwa 7X na ọnụahịa gosipụtara
Ngwa kachasị mma iji belata URL site na gam akporo
Nwere ike ịnwe igbe nyocha Pixel 2 na ekwentị gị na Action Launcher